> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka 5S iPhone ah
Sida saxda ah sida wararka xanta ah leh, Apple sii daayay 5S iPhone ee saddex midabo - lacag ah, oo dahab ah, iyo cirro bannaan. Mid ka mid ah oo dahab ah ayaa si weyn loo dooday. Waxaa jira bogaadin iyo waxayan ogayn. The qodobkan muhiimka ah waa in aad u rabto ama aan. Guud ahaan, 5S iPhone waa muhiimad waxa dadka la filayaa inuu noqdo. The ID Touch weyn iyo qaababka cusub ee camera waa ku filan si ay u horumar la wada in ka badan 5 iPhone ka dhigi, iskaba daa isbedel weyn ay soo macruufka 7.
Waa hagaag, ma waxaad walba oo ay tahay 5S iPhone la soo hagaagtay, dhibaatada soo gaartay xogta weli dhacdo. Sida ay u noocan oo kale ah dhibaatooyinka, Apple oo kaliya aad bixisaa sida ay u soo celiyaan xogta hore via Lugood. Taasi waa in la yidhaahdo, ma waxaad ka heli kartaa dib xogta aad lumay haddii aadan haysan ah Lugood gurmad file. Ma runbaa? Sida muuqata ma. Iyada oo ah iPhone 5S qalab ku haboon kabashada fariin, xaqiiqada ah waxaa idiin soo kaban karto, fariimaha qoraalka la tirtiray ama laga badiyay ka iPhone 5S.
Hadda, in qofku uu si qalabka kabashada fariin u iPhone 5S, halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) . Tani macruufka software kabashada xogta awood aad si toos ah baarista iPhone, si aad u hesho dhammaan macluumaadka ku yaal, farriimaha ka mid ahaa. Waxaad ku eegaan karo xogta iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad your computer. Just download version maxkamad free hoose si aad u fiirsan go a.
Talaabooyinka ee soo kabsaday SMS tirtiray ka 5S iPhone
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka
Marka aad soo bixi barnaamijka ka link ee kor ku xusan, waxa ay ku rakibi on your computer, ka dibna waxa ay maamulaan si fudud u riixaya icon ku desktop-ka. Waxaad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah ee hoose ka dib markii ay isku xidha aad iPhone 5S.
Sida waxa ku cad suuqa kala kor ku xusan, aad iPhone 5S ayaa ku xiran si guul leh. Next, waxaad riixi kartaa Start Scan badhanka si ay u bilaabaan baar qalab aad. Marka iskaanka bilaabmin, aad arki doonaa waxa dhaco sida soo socota. Waqtiga sawiridda, waxaad bilaabi kartaa previewing xogta laga helay.
Tallaabada 2. Ladnaansho fariimaha lumay on 5S iPhone
Iskaanka wuxuu noqon doonaa wax yar waqti lumis, haddii ay jiraan in badan oo data (badiyay iyo mid hadda jira) ku kaydsan aad iPhone. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka oo dhan, kaliya aad u baahan tahay si loo xaqiijiyo in aad iPhone aan barkinta doonaa, taas ayaana ku filan. Marka scan la soo gabagabeeyo, waxaad ku eegaan karo dhamaan fariimaha in natiijada scan ka hor soo kabsaday. Markaas eegista sax shayga aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo riixaya Ladnaansho button.
Fiiro gaar ah: Messages muujiyay natiijada scan ku jira fariimaha tirtiray iyo fariimaha jira aad iPhone. Haddii aad rabto in aad dib oo kaliya kuwa la tirtiro, waxaad eegi kartaa waxyaabaha ku orange, ama waxaad isticmaali kartaa badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
iPhone 6s (Plus) Features iyo Details: 10 Waxyaabaha Waxaan doonayaa in aan arko in iPhone 6s (Plus
Sida loo Delete iPhone Data aan Celinta
Sidee inuu ka soo kabsado Notes ka Xaday iPhone, iPad ama iPod Touch